ကျွန်တော့်ချစ်သူအတွင်းရေးမှူးမမ – Grab Love Story
by phyu June 8, 2021
ကျနော် နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတော့။ အလုပ်တွေ လိုက်လျှောက်တယ်ဗျာ…….မကိုလည်း လွမ်းနာကျ..။နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဆယ်နှစ်ကျော်လာတော့ ပျင်းလာလို့ ဆိုပြီးတိုင်းပြည် ပြန်လာခဲ့တာ။
နိုင်ငံခြားက လစာရဲ့ သုံးပုံ ပုံ တပုံလောက် ရရင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာ ခက်တယ်ဗျာ လစာတွေက အတော်နည်းတယ် မြန်မာပြည်က လူတွေကို တကယ်လည်း အံ့သြမိတယ် ဒီလောက် ဈေးကြီးတဲ့ ကုန်ဈေနှုန်းကို လစာနည်းနည်းလေးနဲ့ တောင့်ခံထားတာ အတော်လေး ချီးကြူးမိပေမယ့် စိတ်ထဲကတော့ တကယ် ဂရုဏာ သက်မိတယ်။
ကံကောင်းတယ်ဘဲ ပြောရမလား မသိဘူး FDI ကုမ္ပဏီ တခုက မြန်မာပြည်မှာ invest လုပ်ပြီး ကုမ္ပဏီ အသစ်တဲ့။ သွားပြီး အင်တာဗျူးလုပ်တာ အောင်သွားတယ် အဓိကကတော့ အင်္ဂလိပ်လို နည်းနည်း ပါးပါး ပြောတတ်ပြီး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရှိလို့ပါ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ခန့်မှန်းထားတဲ့ လစာထက် ပိုများတယ်..။ အခြား Facility လည်းရသေးတယ်။ ကျနော်က လည်း နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေ အကြောင်း နားလည်တော့…။ နယ်ကလူဆို အိမ် စီစဉ်ပေးမယ် ထင်ပြီး တောင်းလိုက်တာ ရသွားတယ်။
ကားလည်း ပေးတယ်………ခက်တာက ကျနော် ကားမမောင်းရဲဘူးဗျ ရာထူးကတော့ Country Manager…ဆိုတော့ မြန်မာပြည် အတွက် အကြီးဆုံးပေါ့ဗျာအဲဒီ အချိန် ကျနော့် အသက်က ၃၀ ဘဲ ရှိသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ ….ကျနော့် အလုပ် အတွက် Plan တွေ ဆွဲ…..ရုံးခန်းလည်း ရှာ. အလုပ်ကတော့ အရမ်းရှုပ်ပေါ့ဗျာလူတွေ ခေါ်ဖို့ အတွက်လည်း… ပြင်ဆင်သတင်းစာထဲမှာ ကြေငြာထည့်ဂွင်ကတော့ တကယ့်ဂွင်ဘဲဗျာ။
ကျနော်ကို ငှားပေးထားတဲ့ လုံးချင်း အိမ်မှာ ကျနော် တစ်ယောက်တည်းလေ…..။အင်တာဗျူးလုပ်တော့ လာလိုက်ကြတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲဗျာ..။ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီကလစာ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ လာလျှောက်ကြတာ….ဒီစာဖတ်တဲ့ အထဲတောင် ပါအုံးမလား မသိဘူး….. ဆောရီးပါဗျာ………. အဲဒီတုန်းက ကျနော် နှာဗူးကျခဲ့လို့ တချို့ဆို တော်လျှက်နဲ့ အရွေးမခံခဲ့ရဘူး။
စာလည်း ဖတ် ပညာလည်း ရအောင် နည်းနည်း ရေးပြရင်းနဲ့ စာရှည်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်ရတယ်။ဖြတ်ပြီးဘဲ ပြောလိုက်တော့မယ်ဗျာ…..။အဓိကကတော့ အတွင်းရေးမှူး အရင် ရှာရတာဘဲ… ဒါမှ ကျနော့် အတွက် ၀န်ပေါ့မှာ ဆိုတော့..။လာလျှောက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို အကုန်မေးတယ်..။. မြန်မာဝတ်စုံ ၀တ်လာတဲ့ ကောင်မလေးတွေ…ရှက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဆို………ကျနော် အင်တာဗျူးလုပ်တာ ဆယ်မိနစ် မကြာဘူး…။ခေတ်ဆန်ဆန်နဲ့…အပြောအဆို ရဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ဆို အင်တာဗျူး လုပ်တာ
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ဆယ်ခါတင် ၅ ယောက်ကို second အင်တာဗျူး ခေါ်လိုက်တယ်။မခေါ်ခင် စိတ် စမ်းလိုက်တယ်..။ ကျနော် အလုပ်များနေလို့ ဒီကို အင်တာဗျူး မတိုင်ခင် စနေ တစ်ရက်လောက် လာကူပေးပါလားဆိုတော့..။ ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က NO တဲ့..နောက် နှစ်ယောက်ကတော့ အင်တင်တင်ဘဲ..။ ကျနော့် အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာမယ့်တစ်ယောက်ကတော့
သူက ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ စ လို့ ကျနော်သူ့ကို ၈၅ % ရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…။ ဒီလိုနဲ့ ချိန်းထားတဲ့စနေနေ့ ရောက်တော့….မမ ရောက်လာတယ်…။ ကျနော်လည်း အလုပ်လျှောက်လာတဲ့ ဖိုင်တွေထဲကသူ့ရာထူးနဲ့သူ အဆင်ပြေမယ့်သူလေးတွေကို ရွေးထုတ်ခိုင်းတာပေါ့….။ မမက အရင်က HR မှာလည်းလုပ်ဖူးတော့ လုပ်တာ မြန်တယ်ဗျာ……..နှစ်နာရီလောက် လုပ်လိုက်တော့ ပြီးသွားတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ အဲဒီအချိန်ကတော့ ………..ငွေကလည်း ပေါ တစ်ယောက်တည်း သမားဆိုတော့ ပိုက်ဆံလည်း သိပ်မနှမြောတတ်ဘူးလေ။မ က မနက် အစောကြီး ရုံးကို ရောက်လာတယ်…….ကူညီပေးစရာရှိလုပ်ထားပေးရအောင်တဲ့…။
ဒီနေ့လည်း မကို ကြည့်ရတာ လှနေတာဘဲသတိထားမိတာက အပေါ်က ကုတ်အကျီလေးက မပြောင်းသွားဘူး ဘယ်သူမှလည်း မရှိတော့ ……..မကို နမ်းခွင့်တောင်းပြီး ကစ်စင် ပေးလိုက်တယ်။
နောက် အင်တာဗျူး စလုပ်တယ်။ထုံးစံ အတိုင်း အတွင်းရေးမှူးတွေ လုပ်ရမယ့် အသေးစိတ် အလုပ်လေးတွေ ရှင်းပြတယ် နယ်လည်း တခါတလေ သွားရမယ် ညဘက် ဒင်နာတွေ ဘာတွေရှိရင် လိုက်တက်ပေးရမယ် အပြောအဆို အမူအယာလည်း ရဲရင့်ရမယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ လူမှု ဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းရမယ် ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကတော့ နယ် မသွားနိုင်ဘူးတဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း နယ်တော့ သွားနိုင်ပါတယ်။
သူ့အတွက် မိန်းကလေး အဖေါ်ပါရင်တဲ့တစ်ယောက်တော့ အစ်ကို က လူမှု ဆက်ဆံရေး ပွင့်လင်းရမယ် ဆိုတာ ဘယ်လောက် ပွင့်လင်းရမှာလည်းတဲ့ သူလေးလည်း ချစ်စရာလေးဘဲဒါနဲ့ သူနဲ့ စကားတွေ အများကြီး ဆက်ပြောဖြစ်တယ်ရာထူးအတွက်က မ အတွက် လျာထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ သူကို စိတ်ကျေနပ်အောင် စကားတွေ ထိုင်ပြောဖြစ်တဲ့ သဘောပါဘဲ။
စကားပြောရင်းက သူက သူ့ ကလပ်တွေလည်း တက် နည်းနည်း ပွေချင်တာလေးတွေ သိလာရတယ်….။ခဏနေတော့ သူနဲ့ စကားလက်စသတ်ပြီး ဒီအလုပ်နဲ့ မဟုတ်တောင် အပြင်မှာ မိတ်ဆွေတွေ လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရယ် ဒီည အတွက် ညစာကျွေးမယ်လို့ သူ့ကို ဒိတ်လုပ်လိုက်တယ်။နောက်တော့ မ အလှည့် မနဲ့ကတော့ နည်းနည်း ရင်းနှီးပြီးသား ဆိုတော့ …..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ ပြောဖြစ်တယ်။
မ လစာ ဘယ်လောက် လိုချင်လည်းဆိုတာ ညှိပေးမယ်….နောက် မ အတွက် လုပ်ရမယ့် အလုပ်သဘောတရားတွေကို သေချာ ရှုင်းပြတယ်..။ကိုယ့်ရဲ့ဘေးမှာ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမမလေး ရှိတာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပျော်တယ်ဗျ တကယ်ပြောတာ လုပ်ငန်းခွင့် တိုးတက်ချင်ရင်………… ဘေးမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူတွေ ရှိနေရင် ပိုကောင်းတယ်။
ပြောစရာရှိတာ ပြောပြီး မကို မနေ့က ၀ယ်ထားတဲ့ ဖုန်းလေး ထုတ်ပေးတော့မ အရမ်းပျော်သွားတဲ့ ပုံစံလေး……….ပြီး မှ အားနာတဲ့ ပုံစံနဲ့…….မောင်လေးကလည်းကွာ အဲဒီလောက်ကြီး မလိုသေးပါဘူးဟုတ်ဘူးလေ မရဲ့ အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီဘဲ ကျနော်နဲ့ စကားအမြဲတမ်း ပြောဖို့ အတွက်ရယ်ဆက်သွယ်ရတာ လွယ်ဖို့ အတွက်ရယ် ဖုန်းရှိမှ ဖြစ်မှာလေ။
စကားသာ ထိုင်ပြောနေရတာ မကို အခန်းထဲ ခေါ်ပြီး ဆွဲချင်လှပြီ မကို ဖက်ထားပြီး အချစ်အကြောင်းတွေ ပြောမိသေးတယ် ခဏနေတော့ ကစ်ဆင် ထပ်ဆွဲပြိး နှစ်ယောက်လုံး လိုလားတဲ့ အရာကို စတင်လိုက်တယ် ကျနော်လည်း တခါမှ မလုပ်ဘူးသေးလို့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ အလုပ်စားပွဲပေါ် မတင်ပြီး…သူ့ စကဒ်လေး လှမ်းပြီး ဂျာတဲ့ အရသာ တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာ ပင်တီလေးတောင် မချွတ်ဘူး ဆွဲလှန်ပြီး ဂျာတော့သာ မက လူသာ မချမ်းသာတာ သန့်နေတာဘဲဗျာ။
အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ဆွဲဟပြီး အတွင်းသားလေးကို စိတ်ပါလက်ပါ လျှာနဲ့ လျှက်ပေးမှတော့ ဘယ်ခံနိုင်မှာလည်းးဗျာ ကျနော့် ဆံပင်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး မရဲ့ ခါးက ကော့ကော့တက်လာတာ အဲဒီ အခွေကို ခုထိ ပြန်ကြည့်ရင်းဖီးတက်နေတုန်းဘဲ နောက်တော့ ကျနော်လည်း မနေနိုင်ဘူး သူ့ကို စားပွဲပေါ်မှာဘဲ လိုးလိုက်တယ် ပထမ အစတော့ နာတယ်တဲ့ နောက်တော့ သူလည်း အရမ်းကောင်းလာလို့နဲ့ တူပါတယ်မက အရမ်းအော်တယ် သိလား လုပ်ရင် အော်တတ်တဲ့ ဆော်တွေကို လိုးရတာ ပိုပြီး ဖီးလ်ရှိတယ်။
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ သုံးခါလောက် လုပ်လိုက်တယ် ညနေစောင်းတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ညစာ အတူသွားစားမယ် ဆိုပြီး မ ရဲ့ အိမ် အတွက်ပါ ၀ယ်ပေးလိုက်တယ် ဆိုင်မှာ မကို ဖုန်းသုံးပုံ သုံးနည်းလေး နည်းနည်း ပါးပါး ပြပေး အိမ်ထိ ပို့ပေးပြီးကျနော် ပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ စော်လေးနဲ့ ညစာစားမယ်လို့ ချိန်းထးတာ သတိရပြီး သူ့ကို ဖုန်းဆက် အလုပ်များနေလို့ပါ ဆိုပြီး တောင်းပန် အခုလာပြီ ဆိုပြီး သူ့ဆီ အမြန် ပြေးသွားရတယ်။
သူက ဘဲကင် စားချင်တယ်ဆိုတော့နီးနီးနားနား.က ရွှေဘဲမှာဘဲ သွားထိုင်လိုက်တယ် ဘဲကင် တခြမ်းမှာပြီး ကျနောက် ဘီယာသောက်တော့ သူလည်း သောက်မယ်တဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်း တော်တော် ချစ်စရာ ကောင်းတာဘဲနဲ့လည်း ကွဲသွားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး သူ့ဘဲက နိုင်ငံခြား သွားလို့သာ ကွဲသွားတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ သူလည်း သောက်နိုင်သားဗျာတစ်ယောက် သုံးလုံးလောက် ကုန်တော့ကလပ် ကို ဆက်သွားမယ် ဆိုပြီး သွားကြတယ်။
ကျနော်က မကတတ်ဘူးဗျာ သူက ကချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ကျေန်ာက ပုလင်းထောင်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း စားပွဲမှာ ပုလင်းထောင်ထားပြီဆို မိန်းကလေးတွေက လာထိုင်ချင်ကြတယ်လေ။ကျနော်လည်း ပျင်းတာနဲ့ လာထိုင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ တော်ကီပွားနေတော့မရွှေချောက ရောက်လာပြီး ဝုန်းပါလေရော ဒါနဲ့ ကျနော်က……ချစ်လေးကလည်းကွာ ကိုကိုက ရိုးရိုးစကားပြောတာပါ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဆိုပြီး ခေါင်းတွေ သပ်ပေးလိုက်တော့ ငြိမ်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ နှစ်ယောက် ထိုင်ပြီး ဆက်သောက် ဆယ်နှစ်နာရီလောက်ကျမှ ကဲချစ်လေး ဘယ်ပြန်မှာလည်း…… ကိုကို လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ ဒီအချိန်မှတော့ အဆောင်လည်း ပြန်ဝင်လို့ မရတော့ဘူး ကိုကို သွားတဲ့ နောက် လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ပြသနာက အဲဒီမှာ စတာ…………. driver ပါနေတော့ အိပ်ကို မခေါ်သွားချင်ဘူးလေ ဒီလိုလုပ် ချစ်လေး……ကိုကို ဟိုတယ်မှာ အခန်းယူပေးထားမယ်ကားသွားထားပြီးရင် ကိုကို ပြန်လာခဲ့မယ် ဒီလိုနဲ့ အပြန်လမ်းကြမှ မ ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ သတိရတယ်။
ဒီအချိန်ကြီး ဆက်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူး ဆိုပြီး sms အတိုလေး လှမ်းပို့လိုက်တယ်အလုပ်များနေလို့ ဖုန်း မခေါ်ဖြစ်တာ ..အိပ်နေပြီလား ဆိုတော့ သူ့ဆီက ချက်ခြင်း ဖုန်း ပြန်ဝင်လာတယ် မောင်လေးဆီက ဖုန်းကို စောင့်နေတာတဲ့ ဒါနဲ့ သူ့နဲ့ ခဏဖုန်းမှာ ကြွေပေးတော့ ကားဆရာက ပြုံးစိစိနဲ့
ဒါနဲ့ driver ကို မုန့်ဖိုး ပေးပြီး တက္ကစီနဲ့ ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကျနော်လည်း သူ့ထွက်သွားတာနဲ့ တံခါး ပိတ်ချင်ယောင်ဆောင် ၊ သူလည်း ပျောက်သွားရော ချစ်လေးဆီ ပြန်ပြေးရတာ။
မောလို့ မောမှန်းတောင် မသိဘူး ဇာကပ်နေတာကိုး ဟိုတယ်လည်း ရောက်ရော သူ့အခန်းကို ကမန်းကတန်း ပြေးရတယ် တော်ကြာ အိပ်ပျော်သွားရင် နေကောင်းသွားမှာ စိုးလို့လေ။ရောက်ရောက်ချင်းတံခါးခေါက်တော့အထဲက ဘယ်သူလည်းတဲ့ကိုကိုပါ ဆိုမှ ဖွင့်ပေးတော့ သဘက်လေး ပတ်ထားသူရေချိုးခန်းထဲမှာ မျက်နှာသစ်ပြီး ထွက်လာတာတဲ့ သူက ရယ်ဒီဆိုတော့ ကိုယ်လည်း အဆင်သင့်ဘဲပေါ့သူ့ကို ဖက်.ကစ်ဆင်လေး ဆွဲပြီး ခုတင်ပေါ် ပက်လက် လှန်ခိုင်းလိုက်တယ်ချစ်တော် ချစ်တဲ့ ပထမဆုံးမမ သင်ပေးလိုက်လို့အခုဆို မနေနိုင်ဘူးဗျာမဂျာရရင် မပြည့်စုံသလိုဘဲ။
သူက ပြောတယ်မဂျာဘဲ လုပ်ရင် ဖီးလ်အပြည့်လာဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့……..ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ လိုက်လျောပေးလိုက်ရတာသူ့တို့ ဖီးလ် အပြည့်ရဖို့ ဂျာပေးမှ ပိုကောင်းတာတဲ့။သူက အမွှေးလေးတွေ ရိပ်ထားတာဗျအမွှေးရိတ်ထားထားလို့ ကြမ်းရှရှနဲ့ကလည်း တမျိုး အရသာ ရှိတယ်။
အစိလေးကို စုပ်ပေးလိုက်အတွင်းသားလေးကို လျှာလေးနဲ့ ထိုးလိုက်အပြင် နှုတ်ခမ်းကို ပွတ်ဆွဲလိုက်နဲ့အစိကို စုပ်ရင် အရမ်း မစုပ်နဲ့နာတတ်တယ်ခပ်ဖွဖွလေး စုပ်ပေးပြီး လျှလေးနဲ့ ပွတ်ပေးကြည့်ဘယ်မိန်းမ မ တောင့်မခံနိုင်ဘူးခဏလေးနေတော့ သူ့ ဆတ်ကနဲ ဆက်ကနဲ တွန့်သွားပြီးပြီးသွားတယ် သေချာတယ် ဒီစော်လေး ဒီကိစ္စ အတွေ့အကြုံနည်းသေးတယ်ဒါမှ မဟုတ် သူ့ဘဲက ကောင်းကောင်း ပြုစုတာ မခံဘူးတဲ့ သူဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဒတ်ထိ သိလိုက်ပြီလေ။
ဒါနဲ့ သူဘေးနားမှာ ၀င်လှဲပြီး ကစ်စင် ဆွဲလိုက် နို့အုံလေးချေလိုက်နဲ့တစ်ယောက်တည်း အလုပ်များနေတုန်း သူက ကျုနော့် ကို ပြုစုချင်တယ် ဆိုလို့ ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။သူ မှုတ်တာတော့် တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာသူ့ဘဲကို လုပ်ပေးနေကြတဲ့သူ့ဘဲကတော့အပြုအစု ကျနော့် လောက် မကောင်းဘူး တဲ့ နောက်ပိုင်း သူနဲ့ အရမ်း ပွင့်လင်းသွားမှ ပြန်ပြောပြတယ်။
သူ့အဖုတ်လေးကို ဒစ်လေးနဲ့ ပွတ်လိုက် နို့လေးကို ဆွဲလိုက်နဲ့သူပြန်ပြီး စိတ်အရမ်းပါလာအောင် နူးတော့ သူခါးလေးက အလိုက်သင့်လေးလီးကို လိုက်လိုက် တည့်ပေးတယ် မခံနိုင်တော့ဘူးဗျာအသာလေး ထည့်ကြည့်လိုက်တယ်…….. အိုး စီးနေတာဘဲဗျာ။ကောင်းလိုက်တာစိတ်ထဲက ထင့်ကနဲတော့ ဖြစ်သွားတယ်သူ့ထဲက အရည်တွေ ကျနေတာတောင် ကျနော့်ဟာ မချေင်သွားဘူး.ဒါနဲ့ မှိန်းပြီး လိုးပေးရင်း ကသူက မြန်မြန်စောင့်ပေးပါတဲ့ ကျနော်လည်း အားရပါးရ စောင့်ပေးလိုက်တယ်။
အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ သေချာသွားပြီသူပြီးသွားတော့ကျနော့်ကောင်ကို ဆွဲစုပ်နေလို့ ကျနော်လည်း မရှေးမနှောင်းဘဲထွက်သွားတယ် သူ့မှာ မျှော့ပါတယ်ဗျာ တကယ့် ရှားပါး ပစ္စည်း။ကျနော့် တသက် လိုးပေးဘူးတဲ့ မိန်းမ တွေ ရာကျောနေပြီ နှစ်ယောက်ဘဲ မျှော့ပါတာ ကြုံဘူးတယ်။ချစ်လိုက်တာ ချစ်လေးရယ်စကားလည်း ပြော သူ့ကို ယုယုယယလေး ထွေးပွေ့ပြီးနဖူးလေးကို နမ်းတော့သူ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်လေးတွေ တွဲနေတယ်။
ချစ်လေး ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့သူ့ရည်းစားက သူ့ကို သစ္စာဖောက်သွားတော့ မခံချင်တာနဲ့ သူလည်း ကျနော်နဲ့ အိပ်လိုက်တာတဲ့အဲဒီကောင် ဘယ်လောက် အသုံးမကျလည်း ဆိုတာ မသိဘူး……မျှော့ပါပြီး ဒီလောက် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ စော်ကို ပစ်သွားတယ်ဆိုတော့ တကယ့် ငတုံးလို့ စိတ်ထဲကတော့ ကျိန်ဆဲမိတယ်။
ချစ်လေးရယ်…..ကိုကို တစ်ယောက်လုံးရှိနေပြီဘဲ.မေ့လိုက်တော့ကွာ ကိုကို က ချစ်လေးကို အမြဲချစ်နေမှာ ပါ ဆိုတော့သွားပါတဲ့လူကို လုပ်ပြီးမှ ရည်စားစကား လာပြောတယ်ပထမ အင်တာဗျူး တုန်းကတော့ မျက်နှာသေကြီးနဲ့တဲ့ ရီလိုက်တယ် မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်စေချင်ရင် သူတို့ကို ရီအောင် လုပ်လိုက် ဘယ်လောက်ဘဲ စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်ပါစေဟာသတွေ ပြောပြီး ရီအောင် လုပ်လိုက်ရင် ပြန်ကြည်သွားတာ မျာတယ်။
သူ့နဲ့ စကားပြောရင်းက ဗိုက်ဆာတယ်တဲ့ဟိုတယ်ကို လှမ်းမေးကြည့်တော့ မရတော့ဘူးတဲ့ သူက မရဘူးဗျာ……..ဇွတ်ဒါနဲ့ ဘယ်မှ ဒီအချိန် စားစရာ ရနိုင်မလည်း ဆိုတော့ သူက ..သိမ်ကြီးဈေးဘက် မှာတော့ ရလောက်ဆိုလို့ တက္ကစီ ဌားပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့ရတသေးတယ်ကားပေါ်ရောက်တော့ ကျနော့် ပုခုံးပေါ် ခေါင်းလေးတင်ထားတဲ့ သူ့ကို ဖက်ပြီးအဖုတ်လေးကို ကားသမား မသိအေငာ် ထပ်ပွတ်ပေးသေးတယ်……….. ငါး မိနစ်လောက်နေတော့သူက လက်ကို အတင်းဆုပ်.နား နားကို ကပ်ပြီး မြန်မြန်တဲ့ဘယ်ရမလည်းဗျာအမြန်လုပ်ပေးလိုက်တာတွန့်ပြီး သူပြီးသွားတယ်။
သိမ်ကြီးဈေးနားမှာ ထမင်းကြော်စားပြီး..ဟိုတယ်ကို ပြန်ရောက်တော့ ၁ နာရီခွဲတော့မယ်။တကယ့်ချစ်သူတွေလိုဘဲဟိုတယ်ရောက်တော့ ရေခဲသတ္တာထဲက ဘီယာထုတ်သောက်ပြီးစကားပြောလိုက်ဆက်ဆွဲလိုက်နဲ့ . လေးချီ လုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်တဲ့ အချိန်တိုင်း ဆွဲစုပ်ထားတဲ့ သူ့အဖုတ်လေးထည်က ပြန်တောင် မထုတ်ချင်ဘူးဗျာ စိမ်လို့လည်း ကောင်းတယ်တချို့ အဖုတ်တွေဆို စိမ်လို့ မကေငာ်းဘူး ပူတယ်။
မနက်လင်းတော့လည်း လင်မယား ကျနေတာဘဲ…….တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနမ်းတွေနဲ့ နိုးထပြီး……သူ့ကို တချီလောက် ချစ်ပြလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့မှ break fast တူတူ သွားစား…..ပြီးတော့ သူနဲ့ အတူ ဘုရားသွားဖူးလိုက်သေးတယ်။ကျနော့်ဘ၀မှာ ထူးဆန်းတာက မ်ိန်းကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ကို တပြိုင်တည်း ရတာများတယ်အပြန်ကြတော့ city mart ခဏ၀င်ပြီး ၀ယ်စရာ ရှိတာ ၀ယ်ပြီး အိမ်ကို သူ့ကိုပါ ခေါ်လာခဲ့တယ်..။
နေ့လည်စာ က သူက လက်စွမ်းပြချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့ကို ချက်ခိုင်းလိုက်တယ်။
နောက်တခု ပြောရအုံးမယ်ကျနော့် ချစ်သူတွေကို ကျနော်က ကိုယ်တိုင် အတွင်းခံ စိတ်ကြိုက် ၀ယ်ပေးလေ့ရှိတယ်.ဗျ..ညနေကျရင်တော့ MK သွားပြီး သူ့အတွက် ……. တခုခု ၀ယ်ပေးအုံးမှဘဲ ဆိုပြီး…… စိတ်ကူးထားတာ တခါတလေတော့လည်း အဲဒီဘဝလေးကို ပြန်လွမ်းသေးတယ်။
တယောက်တည်း ဆိုတော့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ် ချုပ်ချယ်မဲ့သူလည်း မရှိ ရည်းစားဆိုလည်း စိတ်ကြိုက်ထားကျနော်စည်းတခုတော့ထားတယ်သူမကြည်ဖြူဘဲ ဘယ်မိန်းကလေးမှ အတင်း မလုပ်ယူဘူး သူနေ့လည်စာ ချက်နေတုန်း အပြင်ထွက်မနဲ့ ကြူ လိုက်သေးတယ် မကလည်း ဖုန်းရလို့ ပျော်နေတာလေသူ့ အလုပ် အသစ်ရတယ်ဆိုတော့ သူ့ မိသားစုတွေပါ ပျော်နေကြတာ။မရဲ့ညီမလေးကလည်း တကယ့် အငုံးလေးဗျ……စားချင်စရာလေးသူကပါ ဘေးက လှမ်းဝင်ပြောနေတာ တွေ့တယ်သူ့အမေကလည်း ထမင်း ဖိတ်ကျွေးချင်လို့တဲ့။
တနလ်ာနေ့ ရုံးကို လာခဲ့ဖို့ ပြောပြီးမနဲ့ စကားဖြတ်လိုက်တယ်။
ချစ်သူ ချစ်ကျွေးတဲ့ နေ့လည်စာ စားပြီးတော့တီဗွီလေးကြည့်လိုက်သူ့အဖုတ်လေးနိုက်လိုက် နိုလေးချေပေးလိုက်နဲ့တကယ်ပြောတာချစ်သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အောကားကြည့်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်သူ့တို့ဆီက ပညာတွေ အများကြီးရခဲ့လို့ ကျနော့်ဘ၀မှာ မိန်းကလေးတွေဆီက အချစ်ကို ရခဲ့တာလေ။
ချစ်လေး ဗွီဒီယိုထဲက အတိုင်း စမ်းကြည့်ရအောင် ဆိုတော့ သူက အလိုက်သင့်လေး ကုန်ပေးတယ်ဆိုဖာပေါ်မှာ မှောထားတဲ့ သူ့တင်လေးတွေကို ကိုင်ပြီး နောက်ကနေ ဂျာပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲ လီးထည့်ပြီး အားရပါးရ စောင့်ပေးလိုက်တယ်သူက သူ့ကြမ်းမှ ကြိုက်တာသူ့အသားနာလာလေ…….သူက ပိုပြီး ဖီးလာလေဘဲအဲဒါဟာ စိတ်ရောဂါ တမျိုးဆိုတာ နောက်ပိုင်း စာတွေ ဖတ်မှ သိရတယ်။
အဲဒီလို စော်မျိုးက သူ့ကို ယုယပြီး နုနုရွရွ ချစ်ပြတဲ့ ဘဲတွေ ဆို အသေမုန်းသွားတယ်။ကျနော်လည်း သူ့တင်ပါးကို ရိုက်လိုက်လိုးလိုက် ကောင်းလည်းကောင်း.နို့ကို ဆွဲလိုက် လိုးလိုက်နဲ့ ခေါင်းလေးကို လှမ်းကိုင်တော့ဆံပင်ပါ ဆွဲပြီးလုပ်တဲ့.ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဒါနဲ့ လက်တဖက်က ဆံပင်ဆွဲပြီးတဖက်က ဖင်ကြီး ကိုင်ပြီး စောင့်တာ……. အသားချင်းရိုက်သံက အရမ်းမိုက်တယ်။
ကိုလည်း သူ့ကောပေးနေတာကို ကြည့်ပြီး ပိုပိုပြီး ဖီးလာတယ်။ဒါနဲ့ လက်တဖက်ကို တံတွေးဆွတ်ပေးပြီး ဖင်ခေါင်းလေးပါ ချဲ့ပေးတော့အို ကောင်းလွန်းလို့တဲ့ မြန်မြန် လုပ်ပါ ဆိုတာ ချည်းဘဲ ဒါနဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက် ကြတော့ ပြီးသွားတယ်……သူနဲ့ ပြီးတိုင်း ကျနော် ချက်ခြင်း ဆွဲမထုတ်ဘူးသူစွဲစုပ်တာလေးကို ခံလို့ကောင်းလို့။ခဏနေတော့ မဆီက ဖုန်းလာတယ်…….ညနေလာခေါ်ပါလားတဲ့ တွေ့ချင်လို့တဲ့။
အင်း လာမယ်ပြောပြီး ဖုန်း အမြန် ဖြတ်လိုက်ရတယ်.ချစ်လေး သိသွားမှာ စိုးလို့
ကျနော်က ချစ်လေးကို ချစ်လေးကိုတော့ ကိုကို မခိုင်းရက်ဘူးကွာသင်တန်းထက်တပ်လိုက်……ကိုကို ထားပေးမယ်ချစ်လေး အလုပ် မလုပ်နဲ့အုံးဆိုတော့ သူကလည်း အိုကေတဲ့ ။သူ့ကို အဲဒီအချိန်က နံမည်ကြီး management လို ဖြစ်နေတဲ့ ABE advance diploma တက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း သူနဲ့ ကျနော် တစ်ပါတ်ကို နှစ်ရက်လောက်တော့ လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။
ကျနော်က ကျနော်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို ပိုပြီး အောင်မြင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့် သူတို့ လိုအပ်တာ မှန်သမျှ ထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်ဗျာ ကိုယ်တတ်နိုင်တာ ဆို သူ့တို့ကို လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ချစ်လေး ၀င်ရှုပ်သွားတာနဲ့ မမနဲ့ ဇတ်လမ်း နည်းနည်း ပြတ်သွားတယ်။မမ ဖုန်းခေါ်ထားလို့ ညနေ ပြေးတော့မယ် ဆိုတော့ သိတဲ့ အတိုင်း ကားမမောင်းတတ်တဲ့ ကျနော်က ကားကြီးကို ထားပြီး တက္ကစီနဲ့ ပြေးရတာပေါ့သူတို့ လမ်းထိပ်ရောက်တော့သူ့ကို ဖုန်းဆက်ရသေးတယ်။
ထုံးစံအတိုင်း လမ်းတွေမှာ လမ်း ဆိုင်းဘုတ်က ရှိတာ မဟုတ်ဘူးအိမ်နေရင်း ၀တ်စုံလေးနဲ့တောင် မက ထင်းနေတာဘဲ….ကမန်းကတန်း ထလာတာ ဖြစ်မယ်ဆံပင်လေး ဘိုသီဘတ်သီ ဂါဝန်လေးနဲ့မ က သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး မိတ်ဆက်ပေးတယ်သူ့အလုပ်က ဆရာပေါ့သူ့အမေနဲ့ အဖွားကအံ့သြလို့မရဲ့ ဆရာဆိုတော့ အဖိုးကြီးလို့ ထင်နေတာတဲ့ငယ်ငယ်လေးနဲ့တော်လိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ ရှက်တာပေါ့ဗျာဟဲဟဲသူ့အမေနဲ့ အဖွားကို စကားတွေ အများကြီးပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
အများစုကတော့ သူတို့ ပြောတာပါ မ ရဲ့ အဖေ သေပြီး နောက်ပိုင်း မ ကိုဘဲ အားကိုးနေရတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ် ကုန်ကျစရိတ်က ကြီးလာလို့ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းတယ် ဆိုတာ ဒါနဲ့ ကျနော်ကလည်း မ အနေနဲ့ အခုဆို လစာ ငါးရာကျော်လောက်ဆိုတော့ငါးသိန်း နီးပါလောက် ရမှာပါအခြား အပိုတွေ ဘာတွေနဲ့ ဆို ခြောက်သိန်းလောက်တော့ ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ ကျေးဇူးကြီးပါတယ် မောင်ရင်ရယ်တဲ့သူတို့ အိမ်မှာ ထမင်းစားဖို့ ခေါ်နေသေးတယ်။
သူတို့ မိသားစု စားဖို့ ချက်ထားတာလေး ကျနော်စားလိုက်ရင် သူတို့ ကိုယ်တာ လျော့သွားမှာ သိလို့ ဗိုက်မဆာသေးဘူးဆိုပြီး အတင်းငြင်းခဲ့ရတယ်ကျနော့်ဘ၀က ငယ်ငယ်က အရမ်း ဆင်းရဲတယ် ဆိုတာ သူတို့ကိုတော့ မပြောပြခဲ့ဘူး။မကို ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ မကပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ မောင်ဒီနေ့ မ ကို မနမ်းရသေးဘူးနော် လူလည်း မလစ်ဘူးတဆိုင်ဆိုင်သွားရအောင်တဲ့မကလည်းကွာ ဆိုင်မှာဆို မလွတ်လပ်ဘူးဟိုတယ် ခဏသွားမယ်လေဆိုတော့ သဘောဘဲ လို့ ဆိုတာနဲ့ ကားဆရာကို အနီးဆုံး ဟိုတယ်ကို ပို့ခိုင်းရတယ်။
ဟိုရောက်တောက တဆက်ရှင် ယူပြီး.ကျနော်က ဘီယာသောက်..မက အအေးသောက် စကားပြောလိုက် နဲ့ နည်းနည်း အရှိရလာတော့မှ မကို နူးပြီး တချီလော်က ဆွဲလိုက်သေးတယ်.နေ့လည်က လုပ်ထားလို့လား မသိဘူး….တော်တော် ကြာတယ်ဗျ မရဲ့ အသံဆို….အပြင်က သေချာပေါက် ကြားလောက်တယ်။မကို လည်း ချစ်တယ်ချစ်လေးကိုလည်း ချစ်တယ်မ ညီမလေးလည်း ချစ်မိနေမလား မသိဘူး အဲဒီကောင်မလေးကလည်း မျက်လုံး အရမ်း ကစားတယ်။
ည ၈ နာရီလောက် ကျတော့ အပြင်ထွက် တခုခု စားပြီး မကို လမ်းထိပ်အထိ ပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ် အိမ်အပြန်လမ်းကြမှ ချစ်လေးကို သတိရတော့ ဖုန်းထဲမှာ သူ့ miss call တွေ အများကြီးဘဲsms လည်း ပို့ထားသေးတယ် ဒီလောက်ခေါ်နေတာတောင် ဖုန်းမကိုင်ဘူးနော်တဲ့ဒီလိုပါဘဲ လိုချင်တာ ရတော့ဆိုတော့ သူ့ကို မနည်းပြန်ချော့ရသေးတယ်။
လုပ်ငန်းခွင် ၀င်တော့မှ မရဲ့ အစွမ်းအစကို ပိုသိလာရတယ် သူက ရာထူးကြီးကြီး မလုပ်ဘူးပေမယ့် အလုပ်လုပ်တာတော့ အတော်လေး စေ့စပ်တယ် အတွင်းရေးမှူးး သင်တန်းလည်း တက်ခိုင်းအင်္ဂလိပ်စာလည်း တက်ခိုင်း သူလည်း အရမ်း ပင်ပန်းပါတယ်။ကောင်းကေင်းတောင် မနားရရှာဘူး။လူမိုက် ကံကော်ငးတယ် ပြောရမလား မသိဘူးဗျာ နေပြည်တော်မှာ တင်ဒါ တင်တာ ကျနော့် တို့ ကုမ္ပဏီက အလုပ်ကြီး တခုရတယ်။
ထုံးစံ အတိုင်း ခိုင်းလို့ ကောင်းတဲ့ ခိုင်းနွားတွေဆို အသဲအသန်ချီးမွမ်းကြတာပေါ့အလုပ်လုပ်တာ ခြောက်လတေငာ် မပြည့်သေးဘူး projects ကြီး ရတယ် ဆိုပြီး ကျနော့်ဆီ အီးမေးတွေ ပို့ပြီး ချီးမွမ်းကြတယ်။ကိုယ်လိုချင်တာက လစာ ဒီထက် ပိုလိုချင်တာလေစပွန်ဆာက နှစ်ယောက်တောင် ပေးထားရသလို ဖြစ်နေတာ အမေ အတွက်လည်း ရှိသေးတယ်။
နောက် တပါတ်လောက် ကြာတော့ အလုပ်ကိစ္စ စာချုပ်ချုပ်ဖို့ ဟိုက regional director ဘုတ် အဖွဲ့လာကြမယ်ဆိုတော့ ပို အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့.နေပြည်သွားဖို့ ကားဌားရ..ဟိုမှာ ဟိုတယ် စီစဉ်ရသူတို့ကို Park royal မှာဘဲ ထား လိုက်တယ်။လေဆိပ်သွားကြိုပြီး အပြန်လမ်းမှာဘဲ မင်း အလုပ်လုပ်တာ တော်လို့ ဒို့အဖွဲ့က မင်းကို လစာ ၁၀၀၀ တိုးပေးလိုက်ပြီ ဆိုတော့
သူတို့ကို ထားခဲ့ပြီး ပြန်အလာ ကားပေါ်မှာ မ က…. ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး အားကျလို့တဲ့ စိတ်ကောင်းထားလို့ ကံကောင်းတာ ဆိုပြီး လူကြီးလေသံနဲ့ ပြောသေး မ အိမ်လိုကခဲ့ကွာ…..တူတူ မအိပ်ရတာ ကြာပြီ အိမ်ကို နယ်ခရီးသွားရမယ်လို့ လှမ်းပြောလိုက် ဆိုတော့သူက မညာချင်ဘူးတဲ့ ဒါပေမယ့် သူလည်း တူတူ နေချင်တော့Yes ဆိုတော့ . city mart မှာ သူ့ကို ထားခဲ့ပြီး driver ကို ကိုယ်က လိုက်ပို့ခိုင်း ပြီးတော့ city mart ပြန်သွား…….အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာဘဲ။
ညဘက်ရောက်တော့ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ဗျာ ဒီညက ပိုမိုက်တယ်ဗျာ ကျနော် စမ်းချင်တဲ့ ဆေးကို စမ်းကြည့်တာလေ။ ယောက်ျလေး သဘာဝ video တွေ အကြည့်များလို့လား မသိဘူး ဗွီဒီယိုထဲက ကောင်တွေ ဆေးထိုးထားတဲ့ ပုံစံတွေ မြင်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေးနေသလို ခံစားရလို့အမြဲတမ်း ပိုပို ကြီးချင်နေတာ နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းပြန်လာလို့ သူဝယ်လာတဲ့ ဆေးလေး သောက်လူဆေးလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ။
သူတို့ဆီမှာက တရားဝင် ရောင်းတာလေ အကျိုး အာနိသင်ကော .ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးကော သေချာ ရှင်းပြပြီးရောင်းတာအခု city mart မှာ ရောင်းနေတဲ့ X Man ဆိုတာ ဈေးကလည်း ကြီး effect ကလည်း ဘာမှ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး
နိုင်ငံခြား website ထဲ ၀င်ရှာကြည့်လိုက် ။ top 100 ဆေးထဲတောင် ပါတာ မဟုတ်ဘူး ၂ ဘူးကို ၉.၉၀ USD ဘဲ ရှိတာဒီမှာက သုံးသောင်းခွဲကျော်နဲ့ ရောင်းတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့က ပွေဖော် ပွေဖက်ဆိုတော့ အလိုက်သိတယ်လေ။အဲဒီနေ့က မကို ဒီဆေး အစွမ်းနဲ့ ချစ်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး သူ့ကို city mart ၀င်ခေါ်ဟိုရောက်တော့ Vodka နဲ့ အချိုရည်လေးတွေ ၀ယ်ပြီး ကောက်တေး စပ်သောက်မယ် စိတ်ကူးထားတ သောက်ဆေးကတော့ ကြိုပြီး သောက်ထားလိုက်တယ် လူးဆေးကိုလည်း နာရီဝက်လောက် ကြို လူးထားတယ်။
သောက်ဆေးကတော့ ချက်ခြင်း အစွမ်း မပြဘူး လူဆေးကတော့ စွမ်းတယ်ဗျာလူထားတာ ငါးမိနစ်ဘဲရှိသေးတယ် ပူရှိန်းရှိန်းနဲ့ အစွမ်းပြလာပြီ တင်းပြီးမာလာတော့ ပိုရှည်လာတယ် ထင်ရတာပေါ့။ မအတွက် ကောက်တေး ဖျော်ပေးရင်းမီးဖိုးချောင်ထဲ တချီလောက် ဆွဲမယ် စိတ်ကူးထားတာ အိမ်နေရင်းမို့ သဘက်လေး ပတ်ထားတဲ့ သူ့ကို နောက် သိုင်းဖက်ပြီး နို့လေးတွေ ချေ ဆံပင်လေးကို နမ်းလိုက် နားရွက်လေး စုပ်လိုက် လည်းပင်းလေးကို ကစ်ဆင်ဆွဲပေးလိုက်နဲ့သူက ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးတယ်။
ကျနော်လည်း လီးကို ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲ တည့်ထားပြီး ဆက်နမ်းတယ်ကာင်းတယ်ဗျ ကားပေါ်မှာ ထောက်ရသလိုမျိုးဘဲ။သူလည်း အရှိန်ရ ကိုယ်လည်း အရှိန်ရရော….သူက ကျနော့်ကောင်လေးကို မှုတ်ပေးမလို့ဆေးလူးထားလို့ မမှုတ်ခိုင်းတော့ဘူး။သူ့ကို ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကဘဲ ဆွဲထည့်လိုက်တယ်။ဆေးကောင်းရင် လီးက မာပြီး ပိုသန်လာတယ်။
သူကတောင် ပြောသေးတယ် မောင်လေးဆေးက ကြီးဆေးလားတဲ့…ဟိုနေ့ထက် ပိုကြီးနေသလိုဘဲတဲ့ သူလည်း မလုပ်ရတာကြာလို့ ထင်တယ် စကားတောင် သိပ်မပြောနိုင်ဘူး လီးဝင်ပြီး ဆောင့်လိုက်တာနဲ့ အောက်လိုက်တာ ဗွီဒီယိုထဲက အတိုင်းဘဲ။တကယ် လိုးလို့ကောင်းတယ်ဗျာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လိုးရတာ အရမ်း အရသာရှိတယ်။
တော်တော်နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး ဆေးကောင်းဝါးကောင်းဆိုတာ အဲဓီလို အစွမ်းပြတယ်။သူ နှစ်ချီပြီ့းပီတဲ့ကိုယ်က ဆွဲလို့ကောင်းတုန်း မောင်လေး မြန်မြန် ပြီးတော့မ မခံနိုင်တော့ဘူး ဆိုမှာ သူ့ကို ပြန်ဂျာပေးပြီး ဖီးလာအောင်ပြန်သွင်း ပြီးမှ သူ့ကို အပေါ်က တက်ဆောင့်ခိုင်းတယ်သူအပေါ်က တက်ဆောင့်တဲ့ အချိ်န် နို့လေးတွေ ချေပေးလိုက်….ဖင်ကြီးကို ညှစ်လိုက်နဲ့ ငါးမိနစ်လောက်ကြတော့.နှစ်ယောက်လုံး တူတူ ပြီးသွားတယ်။
ကျနော့် သုတ်ရည်တွေ သူ့အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်တဲ့ အရှိ အတော်ပြင်းလို့နဲ့ တူတယ် သူ့အဖုတ်လေးက ပွစိပွစိနဲ့ ဆွဲဆွဲညှစ်သလို ခံစားရတယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြီးတာတောင် ကိုယ့်ကောင်က မကျသေးဘူး။သူက ကျနာ့် လီးကြီးကို ဆွဲကိုင်ပြီး လူဆိုးတဲ့ ခုထိ မငြိမ်သေးဘူးဆိုဘဲ သူနဲ့ ကျနော် ကောက်တေးလေး သောက်လိုက်…အမြီးလေး စားလိုက်အောကားလေး တူတူ ကြည့်ရတာ သိပ်အရသာရှိပေါ့နှစ်ယောက်သား သဘက်လေးဘဲ ပတ်ထားတာ ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကို သူက စပြီး လာမှုတ်ပေးတယ်။
ဆေးကောင်းတာ သုံးတဲ့ အခါ အကြောတွေကပိုသန်လာပြီးဒစ်ကြီးက ပိုကြီးလာသလိုဘဲ အဲဒီ ထောင်လာတဲ့ အကြောတွေက စော် အမြှေးပါးလေးတွေကို ဆွဲဆွဲ ပွတ်သွားလို့ သူတို့လည်း ပိုပြီး ဖီးလ်ရှိတယ်လေ။သူ့နှာခေါင်းလေးတွေ ရဲတွတ်……မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး ဆံပင်လေးကို လက်တဖက်က လှန်..ကျနော့်ဟာကို တဖက်က ကိုင်ပြီးအားရပါးရ စုပ်ပေးနေတဲ့ မကို ပိုချစ်လာတယ်ဗျာ။
အဲဒီညက မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် သူ့ကို ၇ ခါ ဆွဲဖြစ်လိုက်တယ်။
မနက်လင်းခါနီးမှာ နှစ်ယောက်သား အိပ်ပျော်သွားတာကျနော်ဆို အိပ်ယာကလည်း နိူးရောဒူးတွေ တေင် ချေင်တယ်ဗျာဒါကြောင့် ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်သူများဆိုပြီးပေ်ါလာတာ။တခု ပြောပြအုံးမယ် မိန်းကလေးတွေ ပီးသွားတဲ့ အခါ သူ့တို့ မျက်နှာလေးတွေက ချက်ခြင်း ချောင်ကြသွားတာနှစ်ခါလောက်ပြီးတဲ့ မိန်းကလေးဆို.သိပ်သိသာတယ်ကိုယ့်စော် ပြီးလား မပြီးလား သိချင်ရင်………… မချခင်နဲ့ ချပြီး သူ့မျက်နှာလေး ယှဉ်ကြည့်။၇ ခါမှ ဆယ်ခါလောက် ပြီးထားတဲ့ မရဲ့ မျက်နှာလေးဆို ချောင်ကြနေတာလေ။
မရေ ထတော့.ညနေ ဒင်နာ သွားရအုံးမယ်ဆိုပြီး နှစ်ယေက်သား နေ့လည်စာ သွားစား ပြီးတော့ အိမ်မှာ နားပြီး လေးနာရီလောက်ကျတော့ driver ကို ဖုန်းခေါ်parkroyal ကို ပြန်ပြေးရတယ်။BOD အဖွဲ့က လူတွေကို ဒေါ်စောရီမှ မြန်မာစာ လိုက်ကျွေး တော်ကီဖုတ်ပြီး မနက်ဖြန် နေပြည်တော် ခရီး အတွက် ရှင်းပြ။
အပြန်ကျ သူတို့ကို park royal ပြန်ပို့ပေးပြီးမနဲ့ ဈေးထွက်ဝယ် MK မှာ မ အတွက် one set လေးတွေ လိုက်ဝယ်ပေးတယ်။မိန်းကလေးတွေဟာ တကယ်ချစ်လာရင် ကျနော်တို့ထက် ပိုသတ္တိရှိတယ်။
အ၀တ်လဲခန်း တံခါးလေး ဖွင့်ပြီး မောင် လှလားတဲ့ သုံးခါလောက် အ၀လိုးပြီးမှ ကျနော့်ကို မောင်လို့ သူက စခေါ်တယ်….ဒါတာင် ပျော်နေလို့ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီး ခေါ်တာ ဖြစ်မယ်။သူတံခါးဖွင့်လိုက်တော့………. အပြင်ကလူတွေ လှမ်းမြင်နိုင်တယ်လေ ဒါပေမယ့် ဂရုမစိုက်ဘူးဗျာ လှတယ်မရေ ပြန်ပိတ်တော်ကြာ လူမြင်ကုန်အုံးမယ်ဆိုပြီး မနည်းပြန်ပိတ်ခိုင်းရတယ်။
အပြန်ကျတော့ သူ့ကို ပြန်ပို့ပေးပြီး အိနြရရ ပြန်လာရတယ်.။ ကိုယ်လည်း တကယ် မစွမ်းနိုင်တော့ဘူး ဆေးကောင်းချက်က အောက်က ကောင်က အခုထိ မာတောင်နေတုန်းဘဲ။ ချစ်လေးကို သတိရလို့ တော်ကီပွားလိုက်သေးတယ်သူလည်း သင်တန်းတွေတက်နေတာရယ်ရည်းစား အသစ်ရယ်နဲ့ ရှု့ပ်နေမှာ…..လို့ တွေးမိရင်း ပြုံးမိသွားသေးတယ်။
မ က အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ…..ပိုပို သိလာရတာ လူသစ်တွေ ခန့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာဘဲကျနော်တို့ ရုံးက projects ရပြီဆိုတေ့ လူတွေ အများကြီး ခေါ်ရမှာလေ နေပြည်တော်က ပြန်လာကတည်းက အဲဒီကိစ္စ စီစဉ်နေရတာ……အရင်က တင်ထားတဲ့ CV ထဲက လူတွေကို အင်တာဗျူး ပြန်ခေါ်မလို့ လုပ်နေတုန်းသူက လှမ်းနောက်တယ်မောင်ရေမလှတာဆို မ ဖယ်ထားလိုက်ပြိနော်တဲ့။
သူဘဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စားရေးမလေးတွေ ခေါ်ပေးတယ် အင်ဂျင်နီယာမ တွေ အများစုကတော့ သိပ်မလြှကြဘူးတစ်ယောက်ဘဲ…….တော်တော်လှတယ်အဲဒီတော်တော်လှတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ကျနော် ချက်ခြင်း ခန့်လိုက်တယ် အဲဒီလို ဘူးကျတာကျနော့်က သူ့ကို ခန့်တယ်ဆိုတာ ကွန်ဖန်းပေးတော့ မျက်နှာလေးမဲ့ပြီးဒီကောင်မလေးကို ကျတော့ ချက်ခြင်း ခန့်တယ်…..မကိုကျတော့ နှစ်ခါတောင် ဗျူးတယ်တဲ့.ဆေးလိပ်လေးကိုင်ပြီး ကျနော့် နှာခေါင်းနား လာကပ်တယ်။
ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မ အမူအရာမြင်တော့ညီလေးက မနေနိုင်ဘူးမမောင့်ကိုစုပ်ပေးပါလား.နောက်တစ်ယောက် မ၀င်ခင်.မြန်မြန်လေး ဆိုတော့လူဆိုးတဲ့ ပြောသာ ပြောတာ….ပါးစပ်က ဒစ်ကို ငုံထားပြီးသားအဲဒီလောက် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြုအစု အောက်မှ ကျနော့် သုတ်ရည်တွေ မရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို တဝြကီး ပန်းထုတ်လိုက်တယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်ပြီးမှ အားနာသွားတယ် အလုပ်ချိန်ကြီးထဲမှာ မရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်တော့ မူမပျက်လို့ တော်သေးတယ်လရည်လေးတွေကို လျှာနဲ့ ဝိုက်သိမ်းပြီး …ပါးစပ်လေးကို တစ်ရူးလေးနဲ့ ကာပြီး မ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားပြီး သွားဆေးရသေးတယ်။
ခဏနေတော့ သူပြန်ဝင်လာမှ အင်တာဗျူး ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်။ညနေ သုံးနာရီကျော်တော့ ဒီနေ့ အတွက် သိမ်းပြီးလိုအပ်တာလေးတွေ ဆက်လုပ် မဆိုးဘူး အဲဒီနေ့က လူတော် ကောင်မလေးတွေ ၅ ယောက်လောက်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ သုံးယောက်လောက်ကို ဇကာတင် ရွေးခဲ့တယ်။ညနေကြတော့ ထုံးစံ အတိုင်း သူ့ကို ပြန်ပို့ပေးပြီးကိုယ်က ပြန်လာ။
အလုပ်များနေတော့သူနဲ့ ကျနော်တောင် သိပ်မလုပ်ဖြစ်ကြဘူး။ရုံးမှာလည်း လူများလာပြီ ဆိုတော့ နည်းနည်း ဆင်ခြင်ရတယ်။ဒါပေမယ့် မက ကျနော့် အတွက် အများကြီး စီစဉ်ထားတယ် ဆိုတာ သိရတဲ့ နေ့မ ကို ပိုချစ်မိလာတာပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ပုံက ဒီလို။ထုံးစံ အတိုင်း သောကြာနေ့ ဆိုတော့လူတွေက အလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်စိတ်မပါကြသလိုနားရက် အတွက် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနေကြတာပေါတနင်္လာကလည်း ရုံးပိတ်ရက်ဆိုတော့ သုံးရက် ပိတ်တယ်လေ။
မက ကျနော့်ကို လာပြောတယ် မောင်ရေ ဒီအပါတ် ချောင်းသာ သွားရအောင်လေတဲ့သူ့မိသားစုတွေကို ချောင်းသာကို လိုက်ပို့ပေးချင်လို့တဲ့။ကျနော်ကလည်း သိတဲ့ အတိုင်း မိသားစုနဲ့ ဆို မလွတ်လပ်မှာ စိုးလို့ မလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မက…..ကိုယ်တောချောစဉ်းစားနော်တဲ့ ရုံးက အလန်းလေး နှစ်ယောက်လည်း ပါမှာတဲ့ မက အကုန် စီစဉ်ပြီးသား သူတို့ အတွက် ဘန်ဂလို တစ်လုံး ကျနာ့် နဲ့ ရုံးက ကောင်မလေး နှစ်ယောက် အတွက် ဘန်ဂလို တစ်လုံး သုံးရက်ပိတ်လည်း ဖြစ် ခရီးသွားရာသီလည်း ဖြစ်တော့ အခန်းတွေ ကျပ်တာကို အကြောင်းပြပြီး သူက သေချာ စီစဉ်ပေးထားတာ။
ဒီလို နဲ့ ဒါဆိုလည်း မ သဘောဘဲ မောင်တော့ လိုက်ခဲ့မယ် တခန်းရရင် ထပ်ယူပေးပါအုံး မနဲ့ တူတူ ကဲရအောင်လေဆိုတော့ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲတယ် အဲဒီနှစ်ယောက်ကို စားနေတဲ့ အချိန် မ ကို သတိရလိမ့်မယ် မထင်ဘူးတဲ့..။
ချောင်းသာကိုတော့ ကားစီးလုံး ဌားလိုက်တယ်ဒါမှ သွားချင်တဲ့ နေရာ သွားလို့ရမှာလေမနက် အစောကြီး ထသွားတာ ဆိုတော့…………. ဟိုရောက်တော့ ဆယ်တစ်ဘဲ ရှိသေးတယ်။
အခန်း check in ၀င်ပြီး မက အခန်းကို လိုက်ပို့ပေးသေးတယ်။ ပြီးတော့ ဟို နှစ်ယောက်ကိုလည်း….ဒို့မန်နေဂျာကြီးကလည်း သောက်တတ်တယ်နော် နင်တို့ ဝိုင်းသောက်ပေးလိုက်အုံး သူ့ကိုပျော်အောင်ထားလိုက် ဒါမှ လစာတိုးမှာ ဆိုပြီး လှမ်းနောက်လိုက်ပြီး ခဏနေမှ အစ်မ ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့။ကျန်ာလည်း ကဲညီမတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အ၀တ်အစား လဲချင်လဲကြ အစ်ကိုလည်း စားစရာလေးစီစဉ်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီးလမ်းမဘက်ထွက်……….. ပင်လယ်စာ အစုံမှာ ဘီယာ ၀ယ်ပြီး အခန်းထဲ ပြန်လာတော့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က အ၀တ်အစားလဲပြီးပြီးဂါဝန်လေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်က ဘောင်းဘီတောင် မ၀တ်ထားဘူး။
ကျန်ာကြို့က်တဲ့ ကောင်မလေးက ခေတ်ဆန်တယ်.ရဲတင်းတယ်။ကဲလာ.စားကြ တစ်ယောက်က မ ကို သွားခေါ်ဆိုတော့ ….တစ်ယောက်က အလိုက် တသိ ထသွားတုန်းကဲညီမက အစားအသောက်ပြင်ကွာ ဆိုတော့ ထည့်စရာ ပန်းကန်မရှိဟိုတယ်ကို လှမ်းမှာနဲ့ ညီမ.ရေ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ညည်းက ပိုလှနေသလိုဘဲနော်ဆိုတော့ မသိသေးဘူးအစ်ကိုကလည်း.ဒီတိုင်းဆို မလှလို့လားဆိုတော့လှပါတယ် နေရောင်ခြည်ထိုးထားတော့ ပိုပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရတော့ ပေါ့ ဆိုမှ လူဆိုးကြီး ဆိုပြီး.လူကို လိုက်ရိုက်တယ်။
ဘောင်းဘီ ၀တ်လိုက်အုံးမယ်ဆိုတော့ဝတ်မနေပါနဲ့ကွာပြီးရင်လည်း ချွတ်ရအုံးမှာ ပူက ပူနဲ့ဒီတိုင်းလေးဘဲ လှပါတယ်ဆိုတော့သူမျက်နှာလေးက ရှက်သွေးဖြာပြီး…. ချစ်စရာလေးဗျ သူက သက်မွန်မြင့်နဲ့ အတော်လေးကို ဆင်တာ ။အစ်ကိုလည်း လဲလိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး. ဘောင်းဘီရှည် ချွတ်ချ အတွင်းခံပါ ချွတ်ပြီး…..boxer လေး ၀တ်လိုက်တယ်။
ဒုတ်က ထောင်နေတော့ တန်းလန်းကြီးပေါ့ဗျာအပြင်ပြန်ထွက်တော့ သူက စိုက်ကြည့်ပြီး ရီနေတယ်။သေချာပါတယ်.သူနဲ့ ကျနော် ဒီမှာ ဇတ်လမ်း ဖြစ်မယ် ဆိုတာဟိုတစ်ယောက်ရှေ့တော့ ဟန်ဆောင်နေမှ နောက်တစ်ယောက်က ရိုးရိုးအအ ပုံစံလေးသူ အရက်မူးမှ ကျွဲခိုးပေါ်မယ်လို့ မထင်ထားမိခင်ကပေါ့။
ခဏနေတော့ ပန်းကန်တွေလည်း ရောက်လာ…မတို့လည်း ရောက်လာလို့ သူ့ညီမကို ဟင်းပွဲတွေ ခွဲပေးပြီး သူတို့ မိသားစုနဲ့ တူတူ ပြန်စားခိုင်းလိုက်တယ်မရဲ့ ညီမကလည်း ဂါဝန် အပါးလေးနဲ့နေရောင်အောင်မှာ ကော့နေတဲ့ တင်လေးကို ငေးလိုက်သေးတယ်။ကဲ မစားခင် အမောပြေလေး ဆိုပြီး လေးယောက်သား ခွက်ကိုင် ဒီလိုနဲ့ သောက်လိုက် စားလိုက်ဟိုကောင်မလေးက တကယ့်အူရိုင်းကျနော့ ကောင်မလေးက အူယှဉ် သုံးခွက်လောက် ၀င်ပြီးတော့ ဟိုကောင်မလေးက စကား အတော်များနေပြီ
လျှာကလည်း လေးလာတဲ့ အသံနဲ့ကျနော့်ကိုလည်း ကိုကို ဆိုပြီး ခေါ်နေပြီ ခွင်ကတော့ ၀င်ပြီ ကျနော်တို့ သုံးယောက်ကတော့ ဆက်သောက်နေတုန်း မက ဟဲကောင်မလေး နင် မသောက်နဲ့တော့ မူးပြီး အန်နေအုံးမယ် ဒို့ဂျာကြီး စိတ်ဆိုးသွားမယ်ဆိုတော့ရပါတယ် မရယ် ဂျာကြီးက သဘောကောင်းပါတယ် ဆို ပြောလည်း ပြော ခွက်လည်း မော့လိုက်သေးတယ်။ ထိုင်နေတာကလည်း အောက်စက လွတ်တော့အတွင်းက ပင်တီ အဖြူးလေးက ပေါ်နေပြီ…..သူ့အဖုတ်က သိပ်မဖောင်းဘူး။
သိပ်မကြာပါဘူး……ဆရာမ ငါးခွက် အယောက် မှောက်သွားတယ်အိပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ၀င်သွားတာ ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူး သောက်ရင်း ပုလင်း ကုန်သွားလို့မက ထွက်ဝယ်ရင်ကြာနေမယ်..အခန်းထဲက ပုလင်း အရင်ယူလာမယ်ဆိုပြီးသွားယူပေးနေတုန်း ချစ်လေးနဲ့ ကျနော်ဘဲ ကျန်ခဲ့တာ သူ့နံမည်က ယု တဲ့.အပြည့်အစုံတော့ မပြောချင်ဘူး ယုလေး ဘယ်လိုလည်း ရသေးလားဆိုတော့ အိုကေပါတယ်တဲ့ ချစ်စရာ အမူအရာလေးနဲ့ခဏနေတော့ မ ပြန်လာတော့ယုက အထဲဝင်သွားတုန်းမယုက အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတော့မ သူ့ကို မေးကြည့်ပြီးပြီသူကလည်း လိင် ကိစ္စ စမ်းချင်နေတာတဲ့ မကို အဲဒီကိစ္စ အမြဲတမ်း ပြောတိုင်း မက ညွှန်းထားလို့ သူက သိပ်စမ်းချင်နေတာတဲ့။
မောင်လေးဆို ဒုတ်က အကြီးကြီး ဖြစ်နိုင်တယ် ဘာညာနဲ့ ဟာသတွေ ပြောပြီး စနေကြ ဆိုတော့ သူက သိပ်သိချင်နေတာ ဒါဆို သုံးယောက် တူတူ လုပ်မလား ဆိုတော့ အဲဒီလောက်ကြီးတော့ မဖြစ်သေးဘူးနဲ့ တူတယ်တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရင် လုပ်ပြီးမှ မကလည်းကွာ မောင်က အရမ်းဖီးလာနေပြီ ဒီမှာ ကြည့် ဆိုတော့ ကိုယ်တော် ၀ရန်တာကြီးမှာနော်တဲ့.လူတွေလည်း မြင်သွားအုံးမယ် ဆြိုပြီးဒုတ်လေးကို ခပ်ဖွဖွလေးကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။
ပြောဖို့ မေ့နေလို့ မ ၀တ်ထားတာက ကြိုးတချောင်းနဲ့….အောက်က စကဒ် အတိုလေး အောက်ခံ ဘောင်းဘီလည်း မပါဘူး ။ ဒါနဲ့ သူ့ကိုလည်း ပြန်နိုက်ပေးလိုက်တယ်။ဆယ်မိနစ်လောက် နေမှ ယုက ထွက်လာတယ်.သေချာတယ်သူလည်း ဘရာချွတ်ခဲ့ပြီ ယုရေ ကြည့်လည်း လုပ်နော်တဲ့ဒို့ဂျာကြီး.ဘောင်းဘီလည်း ပေါက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ယုက ဟုတ်ပအစ်ကိုဟာကြီးကလည်း ထောင်နေလိုက်တာ…မနာဘူးလားတဲ့ နာတော့ နာတာပေါ့ဟ ချွတ်ထားလို့မှ မရတာ။ ပုဆိုးလည်း မ၀တ်ချင်ဘူး မက ကဲဟာ ငါတော့အိပ်ချင်လာပြီ မနက်ကလည်း အစောကြီး ထလာရတာ ညနေရေထဲ ဆင်းအုံးမှာ ဆိုတော့ အားမွေးလိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး ပြန်သွားတယ်။
ကဲယုရေ.. ကိုယ်တို့လည်း သိမ်းရအေင် ဆိုပြီး အထဲဝင်တော့ ဟိုဆရာမက အထဲမှာ အိပ်တာ ပိုးလိုးပက်လက် တက်ပြီးတောင် စော်လိုက်ချင်သေးတယ်။ဆရာ ဘယ်လိုလည်းတဲ့ ဖီးလ်တွေ စွတ်တက်နေပြီလားဆိုပြီး ယုက စတာနဲ့
ငါက နင်မြင်ကတည်းက ဖြစ်နေတာဒီမှာ ကြည့်ပြီး ဆိုပြီး ဘောင်းဘီ ချွတ်ပြလိုက်တယ်။သူက ဟာ အကြီးကြီးဘဲ ဗွီဒီယိုတွေထဲက အတိုင်း ဆိုပြီး မျက်လုံးလေးပြူး ပြီး.လျှာလေး တစ်လစ်လေးနဲ့ ယု ကိုယ့်ကို ကူညီအုံးကွာ ဒါကြီးထနေရင် အိပ်ပျော်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လို ကူညီရမယ် ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သား ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ပြီး သူက ကိုယ့်ကို ဂွင်းထုပေးနေတုန်း ယုကိုလည်း ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့အဖုတ်လေးကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးပြီး ဖင်လေးကိ ညှစ်လိုက်နဲ့………. သူစိတ်ပါလာအောင် လုပ်ပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ယုပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်ကွာ ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ဂျာပေးလိုက်တယ် သူ့ဖင်လေးလေးက ဖွေးပြီး အမွှေးနုလေးတွေနဲ့ ဘေးနှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက နည်းနည်း တွဲနေပြီ ကျနော့် အကြိုက် အနေအထားရတော့ ကိုယ်မရတော့ဘူး ယုရယ်လိုးချင်နေပြီ ဆိုပြီ ဒုတ်ကို တေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူက ပြန်ဆောင့်လိုက် ။ နောက်ကနေ …. နို့လေးတွေကို ဖက်ပြီး ဆွဲတာ doggy style နဲ့ နှစ်ယောက်သား ကောင်းနေပြီဆိုတော့ သူပြီးအောင် အစိလေးကို လှမ်းကလိပေးလိုက်တာ….သိပ်မြကြာဘူး ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွားတယ်ကိုယ်လည်း မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ်ပြီး နှစ်ယောက် ရေတူတူ ချိုးလိုက်တယ်
ရေချိုးနေတုန်း အသဲယားလာလို့ ထပ်ဂျာပေးပြီး သူ့ကို ချီပြီး အပြင်ထွက်လာတယ်အပြင်ရောက်တာနဲ့ သဘက်လေး နဲ့ သုတ်ပေးပြီး ခုတင်ပေါ် မှာ ပက်လက်လေး သူ့ကို ပေါင်တွေ ပုခုံးပေါ် စွဲတင်ပြီး…………ထပ်ဆွဲလိုက်သေးတယ်
သူလည်း အောက်ပေးတော့ ကောင်းတယ်ဗျာ……လီးဝင်ကောင်းအောင် ပြင်ပေးပြီး အောက်က ပင့်ပင့်ပေးတယ်ဟိုစော်လေးကတော့ ဟောက်တောင် ဟောက်နေပြီ။
ကျနော်လည်း အပြင်မှာ တချီ ထပ်ပြီးအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပြီးမှ ကဲ ကလေးရေ…အိပ်ကျရအောင် ဆိုပြီး ခုတင်ချင်း ချိန်းလိုက်ရတယ် ပင်ပန်းတာလည်း ပါ နှစ်ချီတောင် ဆွဲထားတာဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်။အိပ်ယာက နိုးလာတော့ နာရီကောက်ကြည့်လိုက်တာ လေးနာရီကျော်နေပြီ ဘေးကို ကြည့်လိုက်တော့တစ်ယောက်မှ မရှိတာနဲ့အ၀တ်အစားလဲ ရေကူးဘောင်းဘီလေး ၀တ်ပြီးကမ်းခြေဘက် ထွက်လာခဲ့ပြီး မကို လိုက်ရှာတယ်။
မ နဲ့ သူ့မိသားစုက ဓါတ်ပုံရိုက်နေတော့ ကျနော်လည်း အနားရောက်သွားရော အတော်ဘဲ အစ်ကို လာတာနဲ့….ဒီမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါအုံးတဲ့ဆိုပြီး မရဲ့ ညီမလေးက ဖုန်းလေး ထိုးပေးလို့ သူတို့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးရင်း. .ငေးလိုက်တယ် မရဲ့ ညီမလေးက အတော်လေးကို တောင့်တာပါ တင်ကားကားလေးကိုလုံးဝန်းတဲ့ ဖင်လေးနဲ့ ကွပ်ထားတော့ တကယ့်ကို အနှစ်ဘဲ အနေတော် ရင်နှမွှာကလည်း ဘရာဇီယာကြားက ထိုးဖောက်တော့မယ့် အတိုင်း နေက ကျနေပြီ ဆိုတော့ပင်လယ်ဘက် ကျောပေးထားတဲ့ အတွက်.သူ့အတွင်းခံလေးကို ရေးတေးတေး လှမ်းမြင်ရတော့
ဒီကကောင်က ဒုက္ခပေးပြီလေ ရေကူးဘောင်းဘီအောက်မှ အတွင်းခံမှ မပါတာ ကိုယ်ဟာကြီးက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်လာတပေါ့။ဟိုနှစ်ယောက်ကော မ ဆိုတော့ မက ရေစပ်ကို လက်ညိုးထိုးပြတယ် ကျနော်လည်း ရေကူးချင်လို့ သွားလိုက်အုံးမယ်နော် မ ကော မဆင်းဘူးလား ဆိုတော့ ရေကြောက်တယ်တဲ့။ကျနော်လည်း ဟိုနှစ်ယောက် ရှိတဲ့ နေရာကို သွားပြီး ဟေ့ ရေထဲဆင်းရအောင်လေဆိုတော့ရေမကူးတတ်ဘူးတဲ့ကျနော့် ချစ်လေးက တော့ သွားချင်ပုံဘဲအကြံထုတ်ရတယ်။
ကဲဒါဆို ငါလည်း နှစ်ယောက်တော့ တပြိုင်တည်း မထိန်းနိုင်ဘူး…တယောက်ချင်းဆီ ဆင်းကြဟာ…ဘောကိုင်ပြီး လိုက်ခဲ့ဆိုတော သူဇာက သူအရင် ဆင်းမယ်တဲ့ကျနော်တို့ ရုံးမှာက တကယ့် အချောအလှတွေချည်း ခန့်ထားတာ
သူဇာက လည်း တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် သူ့ဝတ်ထားတဲ့ စကဒ်လေးကလည်း တိုတိုလေး အပေါ်က တီရှပ် အဖြူရောင်အောက်က ဘရာ ပန်းရောင်လေးအောက်မှာ ပုန်းနေတဲ့စနေနှစ်ခိုင်ကို စိတ်ထဲက မှန်းကိုင်ကြည့်တယ်.။
သူဇာကိုဘော ပေါ် တင်ပြီး ရေ နည်းနည်း နက်တဲ့ နေရာထိ တွန်းသွားပေးလိုက်တယ်။
ရေနက်မှ လူလည်း ရှင်းတာလေ လူအများစုက ကမ်းခြေနားမှာဘဲ ဆော့ကြတာကိုး ရေနက်ရောက်တော့ပက်လက်လေး ဖြစ်နေတဲ့ သူဇာကို စလိုက်တယ် ငါထားခဲ့မယ်နော်.နောက်တစ်ယောက် သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ် ဆိုတော့ အကြောက်တလန့်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရယ်တဲ့.ညီမ တကယ် ကြောက်လို့ပါတဲ့အလကားစတာပါ ဟာ ဆိုပြီး ပါးလေး ဆွဲညှစ်လိုက်တယ်။
ကမ်းခြေက ကျနော်တို့ကို သေချာ မမြင်ရလောက်တော့ဘူး ဒါနဲ့ သူဇာကို သေချာ ထိန်းထားနော်.လှိုင်းစီးရအောင် ဆိုသူ့ဘောကွင်းကို အသာလေး ခိုထားလိုက်တယ် အနီးကပ် ကြည့်မှ….. သူ့ နို့လေးတွေက ပိုပြီး စို့ချင်စရာ ကောင်းလာသလိုဘဲ ဒါနဲ့ လှိုင်းခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လာတော့ .ချောလှဲရောထိုင်းပြီး. သူ့ပေါင်ကြားထဲ ခေါင်းဝင်လိုက်တယ်။
အစ်ကိုကလည်း ငရဲကြီးပါအုံးမယ် ကန်တော့နော်တဲ့ ရပါတယ်ကွာ ဆိုပြီး.ညည်း အသားလေးတွေက အိနေတာဘဲ ပေါင်လေးပေါ် ခေါင်းအုန်းပြီး အိပ်လိုက်ရရင်တော့ ဇိမ်ဘဲ ဆိုတော့ သူ စဉ်းစားနေပုံရတယ် လက်တဖက်ကလည်း ပြောရင်းနဲ့ ပေါင်လေးတွေကို မသိမသာလေး ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ပေါင်လေး ဖြေးဖြေးချင်း ကားလာတော့လှိုင်း အလှုပ်မှာ အဖုတ်လေးပေါ် လက်တင်လိုက်တယ်သူလည်း ကြည့်ရတာ အရသာ တွေ့နေပုံ ပေါ်တာနဲ့ စကဒ်အောက်ထဲ လက်ထည့်ပြီး ပင်တီလေးပေါ်က နေ ဖြေးဖြေး ချင်း ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။
သူဇာက ခုမှ သေချာကြည့်မိတယ် တကယ့်မင်းသမီးလေးလိုဘဲနော် အသားကလည်း ညိုတာညိုတာ ချောမွတ်နေတာဘဲ ဆိုတော့ အစ်ကိုက ဘယ်ကြည့်မှာလည်း သဉ္ဖာနဲ့ အစ်မကိုဘဲ ငမ်းနေတာကိုးတဲ့ ……စိတ်ဆိုးတဲ့ လေသံလေးနဲ့ ဟုတ်ပါဘူးကွာ အစ်ကို အလုပ်များတာလည်း သိရဲ့သားနဲ့ ကဲပါ …ကိုယ်လည်း စိတ်ပါလာပြီ သူဇာရယ် ကိုင်ကြည့်မယ်နော် ဆိုပြီး ခါးကို နည်းနည်း မ ခိုင်းပြီး ဘောအောက်ကနေ အဖုတ်လေးကို အားရပါးက ပွတ်ပေးလိုက် ဆားငန်ရေနဲ့ ဆိုတော့ အဖုတ်လေးက အချွဲဓါတ်က ခဏလေး ပျောက်ပျောက်သွားတယ်။
ညကျမှ ကိုယ် အ၀ ပြုစုပေးတော့မယ်ကွာ အခု သန္တာကို သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး ။ကမ်းခြေဘက် ဆွဲ သန္တာနဲ့ကတော့ တကြိမ် စားပြီးသား ဆိုတော့ကစ်ဆင်လေး ဘာလေး ဆွဲပြီး နည်းနည် ဆော့ပေးလိုက်တယ်…
ကဲဟာ ငါ.ပင်ပန်းပြီ သွားနားလိုက်အုံးမယ်.ရေကူးကန်ကိုလိုက်လာခဲ့ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။အပြင်ရေပန်းမှာ ရေချိုးပြီး……ရေကူးကန်ထဲ ဆင်းဘီယာ နဲ့ အားလုံးကြော် မှာပြီး စိမ်နေလိုက်တယ်။
ခဏနေတော့ မ ရယ် သူ့ညီမရယ်ကောင်မလေး နှစ်ယောက်.လေးယောက်သား လိုက်လာကြတယ်။ ကျနော်က ဘီယာသောက်တော့သူတို့ကလည်း သောက်ချင်တယ် ဆိုလို့ ကန်ဘေးမှာ ပုလင်းထောင်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့ကတော့ေ၇ထဲ ဆင်းချင်ပေမယ့် ရေကူးဝတ်စုံ မပါလို့ ဆင်းလို့ မရဘူးသူတို့က အကျီအဖြူဘဲ ခွင့်ပြုတာလေ။မရေ ညဘက် ဘာအစီအစဉ်ရှိလည်း ဆိုတော့ကမ်းခြေမှာ ထွက်သောက်ကြမယ်တဲ့စားစရာတော့ အပြင်ကဘဲ မှာပြီး စားကြတာပေါ့ ဆိုတော့ မချောလေးယောက် ကိုယ်တစ်ယောက်ဒီည ကမ်းခြေဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
ဂီတာလည်း မပါတော့ ဖုန်းနဲ့သီချင်းလေး ဖွင့်ပြီး နားထောင်ရင်း အာလူးဖုတ်ပေါ့ညဘက် ကိုးနာရီလောက်ကြတော့ခဏလေး toilet သွားချင်လို့ ဆို…အခန်းပြန်မယ့် ပုံစံနဲ့ မကို မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲ ပြလိုက်တယ် မ က ဟယ်ငါလည်း အမေတို့ အခြေအနေသွားကြည့်အုံးမှ သူတို့ အိပ်ချင် အိပ်ဆိုပြီး သွားပြောလိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး လိုက်လာခဲ့တယ်။
မ အမေတို့ကို ပြောပြီး မြန်မြန်လာခဲ့နော် အခန်းထဲက စောင့်နေမယ်ဆိုသူ့ကို ပြောပြီး အခန်းထဲမှာ အဆင်သင့်စောင့်နေလိုက်တယ်။ ဘယ်သူတွေကိုဘဲ လုပ်ရ လုပ်ရ မကို တော့ လုပ်ချင်နေတုန်းဘဲ မလည်း အခန်းတခါးဖွင့်ရော ချက်ခြင်း..သူ့ကို ဖက် ခုတင်ပေါ် ပက်လက် လှန်ပြီး ဂျာပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့ တချီကောင်း အားရပါးရ လိုးပေးလိုက်တယ်။
မ”နဲ့က ခိုးလုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး သူက အရမ်းကောင်းလေး ပိုအော်လေဘဲ
ဒါကြောင့် ခိုးစားရတာ လူအတော်ရှင်းမှ အဆင်ပြေတာ။လုပ်နေကြဆိုတော့ တစ်ယောက် အကြိုက် တစ်ယောက်သိပြီးသားလေ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ကြာတော့ တူတူ ပြီးလိုက်ပြီးကမ်းခြေဘက် ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒီညက သူ့ဇာကို လုပ်ချင်တာ ဆိုတော့ သန္တာကို မူးအောင် တိုက်ရမယ်ဆိုမှ သန္တာကလည်း တကယ့် ကြွက်တွင်းဘီယာ တကဒ်သာ ကုန်သွားတယ် သူက အေးဆေး မကလည်း သောက်နိုင်တယ်။
မရဲ့ ညီမနဲ့ သူဇာသာ သိပ်မသောက်ကြတာ ကျနော်တို့ သုံးယောက်က အရမ်း သောက်နိုင်တယ် ကဲ ညီမလေးနဲ့ သူဇာ ဟိုတယ်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ဘီယာ သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်ဟာ အခန်းထဲမှာ အစ်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ရှိတယ်ဆို သော့ပေးပြီး ခိုင်းလိုက်တယ် သူ့တို့ နှစ်ယောက် ထွက်သွားမှ ဘယ်လိုလည်း ဆရာလေး နေ့လည်က အရမ်းကောင်းလား မကို သန္တာပြောပြလို့ အားလုံးသီိပြီးသားတဲ့ဟာကျနော်တောင် ရှက်သွားတယ်။
သန္တာကတော့ ပြုံးစိစိနဲ့ ကျမတို့ ဆရာက အလုပ်လုပ်တာတင် တော်တာ မဟုတ်ဘူး ဒီကိစ္စလည်း ဆရာကြီးဘဲ သန္တာကတော့သဘောကျတယ်ဆိုဘဲ။ဒီလို လုပ်ပါလား2in 1 စမ်းကြည့်ရအောင် ဆိုတော့ အားလုံးက ကောင်းနေပြီသားဆိုတော့ အိုကေပေါ့ ခက်တာက တစ်ယောက်ယောက် အိပ်မှ ဖြစ်မှာလေဒါမှ မဟုတ် ကမ်းခြေမှာ ထွက်လုပ်ကြမလား ဆိုတော့လည်း မဖြစ်ဘူး မရဲ့ အော်သံ အကြောင်း ကျနော် ကောင်းကောင်းသိတယ်။
ဒါဆို မနက်ဖြန် စီစဉ်လိုက်မယ် သူဇာရယ် ညီမတို့ မိသားစုရယ်ကို ကားနဲ့ ငွေဆောင်ဘက် ခေါ်သွားခိုင်းပြီး ငါတို့ သုံးယောက်နေခဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီး .မ”က အကြံပေးတော့ အိုကေပေါ့။ဒီလိုနဲ့ ဆက်သောက်ကြတာ တိုက်ပွဲ အရင်ဆုံး ကျသွားတာက မ သူတိုက်ပွဲကျသွားတော့သုံးဗူးဘဲ ကျန်တော့တယ်။ကဲ သန္တာရေ ကိုယ်တို့ ဒါလေး ဖြတ်လိုက်ရအောင် ဆိုပြီးသူ့ကို အတင်း ထိုးတိုက်လိုက်တယ်။
ဘယ်ခံနိုင်မှာလည်းဗျာ ကိုယ်တောင် အတော်လေးကောင်းနေပြီ မမူးတာဆိုလို့ မရဲ့ ညီမလေးးဘဲ ရှိတော့တယ်။ကဲ ပြန်ကြရအောင် ဆိုပြီး မ”ကိုတဖက်စီ တွဲပြီး……..အခန်းပြန်ပို့ အထဲရောက်တော့.အ၀တ်လဲမယ်ဆိုပြီး သန္တာက အကုန်ချွတ်ချလို့သူဇာက ကွယ်ပေးထားတယ်ကိုယ်လည်း မသိချင်ယောင် ဆောင် အပြင်ခဏထွက်နေပေးလိုက်တယ် ပြန်ဝင်လာတော့ သန္တာက ညအိပ်ဝတ်စုံလေး သူဇာက ရေချိုးခန်းထဲ အ၀တ်အစားဝင်လဲနေပုံရတယ်။
good night သန္တာ အိပ်တော့ နော်ဆိုပြီး …….သူ့နဖူးလေး နမ်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ တိုးတိုးလေး အားမွေးထားဆိုပြီး ပါးလေး ညှစ်ပြောပြီး ကိုယ်လည် အ၀တ်အစား လဲလိုက်တယ်။ခဏနေတော့သူဇာက ဟိုတယ်က ညအိပ်ဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ် သူဇာတော့ မအိပ်ချင်သေးဘူးအပြင်ခဏထွက်ထိုင်အုံးမယ်ဆိုတောက…….ကိုယ်ကလည်း အိုကေပေါ့အပြင်မှာ နှစ်ယောက်သား လေကန်ရင်းက အေးလာလို့ ဆိုပြီး သူ့ကို ဖက်ထားရတယ်..။
သူဇာ့ကို ဖက်ထားရင်းက ကျနော်လက်တွေက အလိုက်တသိ……. လုပ်ရှားပေးလိုက်တယ်။
အကျီပေါ်ကနေ နို့လေးကို ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ပြီး….နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်း…….
ဖီးလ်ဝင်လာတော့မှာ အောက်ဘက်ကို ဆင်းပြီး အဖုတ်လေးကို ကိုင်ကြည့်တော့သူ့က အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုာတာ သိလိုက်ရတယ်။အထဲလည်း မ၀င်ချင်တာနဲ့အပြင်မှာဘဲ ဆွဲဖို့ စဉ်းစားထားတာ တခါမှလည်း လူမြင်ကွင်းမှာ မလုပ်ဘူးတော့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ။
ဒါနဲ့ သူ့ကို ဆွဲညှိလိုက်တယ် အထဲမှာလူရှိတော့ အပြင်မှာဘဲ ဆွဲရအောင်ကွာဆိုတော့အစ်ကိုကလည်း ရှက်စရာကြီးတဲ့သူ့ငြင်းသံက အားပျော့နေတော့
ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ အောက်ကို ဆင်းပြီး သူ့ကို အပေါ်တက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ်
သူ့အဖုတ်လေးက ချောဆီတွေကြောင့်ဒစ်ကြီးက အဖုတ်လေးထဲကို အသာလေး ၀င်သွားတာနည်းနည်းချင်း နဲ့လိုက် သူက ဇကောဝိုင်းလိုက်နဲ့ကျနော်လည်း အောက်က အသာလေး အလိုက်သင့်နေပေးလိုက်တယ်။သူလည်း မလုပ်ရတာ ကြာလို့ ဖြစ်မယ်ခဏလေး ပြီးသွားတယ်။
ဆံပင်ကို လက်မောင်းကို ကုတ်ပြီး အားယူလိုက်ကတည်းက သဘောက်ပေါက်လိုက်ပြီ။ဒါနဲ့ ခဏလေး မှိန်းထားပြီး သူ့ကို နမ်းလိုက်ဟိုပွတ်သည်ပွတ်လိုက်နဲ့
ဖီးလ်ပြန်သွင်းပေးတယ် ပြီးတော့ သူ့ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးလေး လိုးရင်းက အားမရတော့ဘူးဗျာပတ်ဝန်းကျင်လည်း ဂရုမစိုက်တော့ဝရံတာကို လက်ကိုင်ခိုင်းပြီးကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်။
သူ့ဂါဝန်လေးကို မပြီး.နောက်ကနေ ကစ်တာ ကေငာ်ားလိုက်တာဗျာ စီးနေတာဘဲ သူ့ဖင်ကြီးက အားမလို အားမရနဲ့ ပြန်ပြန်ဆောင့်တာများအသံတောင် ထွက်တယ်။ပြီးသွားတော့ နှစ်ယောက်သား အထဲဝင် ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်ပြီး သူ့အဖုတ်လေးကို ရေဆေးပေးလိုက်တော့သူက အစ်ကိုက အရမ်း နူးညံ့တာဘဲနော်တဲ့အဲဒီလို ပြောမှတော့ကိုယ်ကလည်း..ဘယ်နေနိုင်မှာလည်း……….ပို အစွမ်းပြရတာပေါ့ဂျာပေးလိုက်တာ လူးနေတာဘဲအစ်ကိုကိုလည်း ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ သူ့ပြုစုတာ ခံလိုက်တယ်။
သူ့လျှာစွမ်းလည်း မသေးဘူးးဗျာဒစ်လေးကို လျှာလေးနဲ့ လျှက်တာများ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြီးတော့ ဒုတ်ကို အားမလို အားမရ ကိုင်ပြီး ထုလိုက် ပါးစပ်လေးနဲ့ ငုံလိုက် အရမ်းကောင်းနေတော့ ပြီးသွားမှာ စိုးတာနဲ့သူ့ကို ချီလိုက်ပြီး ဘေစင်ပေါ်ကို တင်ပြူးထွက်နေတဲ့အဖုတ်လေးက လိုးချင်စရာလေးဗျာ ထူးခြားတာ တခုက……သူ့အမွှေးလေးတွေက အတော် နူးညံ့သေးတယ်။
ဒါနဲ့ကိုယ်လည်း သိပ်မစဉ်းစားတော့ဘူး ဒစ်ကို အဖုတ်ထဲ ထည့်သွင်းလိုက်တယ်လည်ပင်းလေးကို နမ်းပြီး……. နားရွက်လေးတွေ စုပ်ပေးလိုက်……ဆိုတော့ သူလည်း အရမ်းကောင်းနေပုံရတယ်ဆောင့်ဆောင့် …..မြန်မြန်ဆောင့် ဆိုတာနဲ့.စောင့်လိုက်တာအဖုတ်နဲ့ ဘောရိုက်သံ တပျက်ပျက်က အကျယ်ကြီးဘဲ…..တော်သေးတယ်အပြင်ကလူ မနိုးလို့။
သူပြီးလို့ သိပ်မကြာဘူး ကျနော်လည်း လိုက်ပြီးပေးလိုက်တယ်
နောက် နှစ်ယောက်သား သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရင်း အိပ်ယာပေါ် ကိုယ်စီတက်လိုက်ကြတယ်။ထပ်လုပ်ချင်သေးပေမယ့် သုံးယောက် တစ်ယောက်ဆိုတော့ တကယ်လည်း သုတ်ရည်က ကျဲနေပါပြီ။မနက်ခင်း အိပ်ယာက နိူးတော့ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး..နာရီကြည့်တော့ ၉ နာရီခွဲနေပြီ။
ဒါနဲ့ မတို့ အခန်းဘက်ကို သွားကြည့်လိုက်တယ်…..အသံတော့ မကြားရ.
တခါးလေးကို တွန်းဖွင့်လိုက်တာအားပါးပါးတမင်ကြံစည်ရင်တောင် ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုး တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျာ။မရဲ့ ညီမလေးအ၀တ်အစားလဲနေတာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့အတွင်းခံလဲနေပုံလေးက အခုထိ မျက်စိထဲက မထွက်သေးဘူးဖင်နှစ်လုံးကြားက နောက်ကို ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်လေး အတွင်းသားလေးတွေကရဲနေတာဘဲဗျာ သူ့တင်ပါးမှဲ့လေးလည်း ရှိသေးတယ်။
ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဗျာ သူ့ကို နောက်က ဖက်ပြီး လည်ပင်းလေးကို နမ်းလိုက်တယ် ချစ်မိသွားပြီကလေးရယ် ကိုကို တကယ် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ချစ်ခွင့်ပေးပါနောက်ဆိုပြီးစကားလည်းပြော နို့အုံလေးလည်း ပွတ်ပေး ပြီးတော့ ခုဏကလို ပြန်ကုန်းခိုင်းပြီး.စောက်ဖုတ်လေးကို အားရပါးရ ယက်ပေးလိုက်တယ်သေချာတယ်ဗျာသူ့မှာ အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိသေးဘူးစောက်ဖုတ်ယက်တာတောင် ကောင်မလေးက မခံနိုင်ဘူး ဒူးလေးတွေ ကွေးကျလာတယ်။
အချိန်လည်း သိပ်မရတော့ကုတင်ကို လက်ထောက်ခိုင်းပြီး………… နောက်က ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပေးမလို့ဘဲ။စော်ကဘဲ ကြပ်တာလား..ဇောကဘဲ ထန်နေလို့လား မသိဘူး.တော်တော်နဲ့ မ၀င်ဘူးဗျာပက်လက် ပြန်လန်ခိုင်းပြီး……..လက်ညိုးနဲ့ အရင် လိုးပေးလိုက်တယ်.ပြီးမှာ လက်ခလယ် အကူညီပါ ယူပြီး
ဖြေးဖြေးချင်း မွှေ့ပေးလိုက်တယ်ထွက်ကျလာတဲ့ အရည်တွေ…နည်းတာ မဟုတ်ဘူးဗျာ။
ခဏနေမှ ခေါင်းလေးတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပေးလိုက်တယ် သူ့ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမိန့်တော် အတိုင်းဘဲ ကိုယ်လည်း မကြမ်းရက်ဘူး ဖြေးဖြေးချင်း မှေးလိုးပေးလိုက်တယ် သူက ကောင်းလွန်းရင် အံကြိတ်ပြီး ညည်းတယ်ဗျာ တကယ်ပါ အခုထိ ဒီမြင်ကွင်းလေး မှတ်မိနေသေးတယ်။
လိုးလို့တော်တော်ကို ကောင်းတာပါ အချိန်လည်း သိပ်မရတော့လို့ လုပ်ရှားပေးလိုက်တယ် သူလည်း နောက်တချီပြီးတော့မယ့် ပုံစံဘဲ လက်မောင်းတွေကိုနည်းနည်းမြန်မြန်လေး အသားကုန်ဆွဲကုတ်နေတယ်ကိုယ်လည်း သူ့နဲ့ အပြိုင် ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်ရှားပြီးပွဲသိမ်းလိုက်တယ်
Room No 305 (ဘီဒီအက်စ်အမ် )
မအေပြီးတော့ သမီး. (စ. ဆုံး)